2Checkout: Nyochaa ịkwụ ụgwọ gị na mba ụwa niile iji bulie ego ha ga enweta | Martech Zone
Ọ bụrụ na ịnwetụbeghị ohere iji jikọta ngwọta nhazi ịkwụ ụgwọ, ị ga-anọrịrị ahụmịhe mmụta mmụta. Ndị na-akwụ ụgwọ ịkwụ ụgwọ nwere ọtụtụ atụmatụ na onyinye… site na ụgwọ, ogologo oge ịkwụ ụgwọ gị ga-aga, na ahụmịhe ọpụpụ nke onye ọrụ, nkwado ụwa, mgbochi aghụghọ, yana ogo ngwaọrụ maka inyocha ego. 2Checkout bụ ọrụ ịkwụ ụgwọ igwe ojii nke na-eme ka ntụgharị ahịa ịntanetị dị elu site n'inye ịkwụ ụgwọ zuru ụwa ọnụ na ahụmịhe ịzụ ahịa metụtara mpaghara.
Mentkwụ Processgwọ nhazi Isi Video
Ihe ọ bụla ị na-ere, 2Checkout nwere ngwaahịa ịchọrọ iji dị mfe ma bulie sọftụwia gị ka ọ bụrụ ikpo okwu Ọrụ, ikpo okwu ecommerce, ngwa ngwa ekwentị ma ọ bụ ọrụ ndị ọzọ dị n'ịntanetị.
2 Ree - Ihe niile ịchọrọ iji ree ụlọ na ụwa. 2Sell na-enyere ndị ahịa aka ịnabata ịkwụ ụgwọ ekwentị na ntanetị site n'aka ndị na-azụ ahịa n'ụwa niile - n'enweghị nsogbu, n'enweghị nsogbu, na ntụkwasị obi.
2Denye aha - jirichaa ugboro ugboro revenue, dịkwuo ndụ uru, na njigide na 2Checkout onyinye.
2Metinye ego - Ihe ngwungwu niile na - enyere aka na azụmaahịa mba ụwa bulie iyiba azụmaahịa dijitalụ. 2Checkout na enyere gi aka ire ahia na ahia gi n’uwa nile, mee ka ntughari gi na onu njide gi di ike, ma na aru oru n’enweghi nsogbu n’ime ahia di n’uwa nile, tinyere VAT na onyinye nnabata ndi ozo.
ECommerce zuru ụwa ọnụ na arụmọrụ
Y’oburu n’achọ igbalite azụmahịa gị, ịga mba ụwa ga-emepe azụmahịa gị ka ọ baa ụba. Nke a bụ mmebi nke uto nke Global eCommerce site na mba, site na ụdị ịkwụ ụgwọ, ọnụ ahịa iwu, asụsụ, ụdị ngwaahịa, na ndị ọzọ!
Gụnyere n'ofe ọ bụla 2Checkout ngwaahịa bụ ịkwụ ụgwọ zuru ụwa ọnụ, API na njikọta ngwaahịa, nchịkọta na ịkọ akụkọ, nchekwa na nchedo aghụghọ, yana email na nkwado nkata.
Debanye aha maka 2Checkout n'efu
Ngosi: Abụ m mmekọ 2Checkout na m na-eji njikọ njikọta na edemede a.
Tags: 2checkout2nweta ego2mgbe2ebanye ahaOstraliyaCanadambaFranceJémanịazụmahịa zuru ụwa ọnụecommerce zuru ụwa ọnụEcommerce ụwanhazi ugwo uwaItalyJapanasụsụNetherlandsugwo nhaziSpenmba kachasị ecommerceUnited KingdomUnited States